Frantsa sy Madagasikara : Mafy orina ny fiaraha-miasa -
AccueilRaharaham-pirenenaFrantsa sy Madagasikara : Mafy orina ny fiaraha-miasa
Omaly tamin’ny 4 ora aty Madagasikara, no noraisin’ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron tao amin’ny lapam-panjakana Elysée ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nilaza ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina fa afa-po tanteraka tamin’ny ity fihaonana ity .Niompanan’ny fihaonana rahateo ny mikasika ny fiaraha- miasan’ny firenena roa tonta. Tanjona hatrany nandritra ny fihaonana ny fanamafisana orina ny fiara-miasan’ny firenena roa tonta izay efa nisy hatrizay teo amina sehatra maro. Maro rahateo ireo orinasa Frantsay goavana no miasa sy monina eto Madagasikara, ary ilaina ihany koa manoloana izany ny fampirisihana hatrany ireo mpampiasa vola amin’ny ezaka ataony. Noho izany niompana betsaka tamin’ny fomba hitondrana ny fanamafisana orina ny fiaraha-miasa sy fampitomboana io fiaraha-miasa io ny resaka nifanaovan’ny filoha roa tonta, na io eo amin’ny sehatra ekonomika,na io eo amin’ny lafiny sosialy ary indrindra ny fampiofanana na ihany koa ny lafiny fandriampahalemana. Mikasika ity resaka fandriampahalemana ity dia ny nivoitra nandritra izany ny fanaraha- maso ireo faritra fanjonoana aty amin’ny faritry ny Oseanina Indiana izay Madagasikara rahateo no filohan’ny OIF na ny vondron’ny tany miteny na mampiasa ny teny frantsay.
Ny momba ny fiovaovan’ny toetry ny andro izay anisan’ny efa tafiditra tao anatin’ny lahadinika nifanaovan’i Hery Rajaonarimampianina sy Emmanuel Macron. Madagasikara izay anisan’ny firenena ahitana ny fiantraikany betsaka amin’ io fiovan’ny toetrandro io, saingy efa nanatanteraka ny fanaovan-tsonia tamin’ny fifanarahana tao Paris, ka anisan’ny mampihatra izany. Anisany, ohatra, ny fampiasana sy fampiroboroboana ny angovo azo havaozina, io izay efa hiroso tsikelikely ka ho maro ny fiaraha-miasa amin’ny firenena frantsay izay hitarina indrindra eo amin’ny lafiny fotodrafitrasa.
Mikasika ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy Frantsa kosa indray dia ny fanamafisana ny fifanarahana hahatongavana amin’ny vokotra haingana sy azo tsaipain-tanana no laharam-pahamehana. Manoloana izany dia nilaza ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina teo anoloan’ny mpanao gazety fa “ireo mpisehatra maro sy ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny fampandrosoana dia antsoina hitovy fomba fijery na io eo anivon’ny fanjakana na io eo amin’ ireo sehatra tsy miankina”. Fantatra izao fa hisy ny valandresaka sy fivoriambe mikasika ny fanavaozana ny toekaren’i Madagasikara izay hotanterahina amin’ity taona ity ary hampivondrona mpampiasa vola frankôfôna maro. Ho an’ny filoha Hery Rajaonarimampianina “nampiseho ny fomba fijery mitovy amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara i Frantsa nandritra ity fihaonana ity, dia ny fanamafisana izay efa natsangana, dia ny tombontsoa ho amin’ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny nosy ary eo ihany koa ny fifandraisana ara-pirahalahiana amin’ny fiaraha-miasa ny firenena roa tonta”. Tamin-kitsi-po tanteraka ny dinidinika ary afaka niresaka ny sehatra rehetra ny delegasiona Malagasy. Ny lafin’ny diplômasia, ny fanamboarana fotodrafitrasa ary ny lafin’ny angovo dia hitondran’ny frantsay fanohanana eto amintsika avokoa. Miara-dia amin’ny filoha any an-toerana ny minisitry ny Raharaham-bahiny Malagasy, ny minisi-panjakana miadidy ny Tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny Minisitry ny Angovo.